Koronaavaayiras: Qorichi busaa dhibee Covid-19 wallaanuuf akka gargaaru baruuf UKtti yaaliin jalqabame - BBC News Afaan Oromoo
Koronaavaayiras: Qorichi busaa dhibee Covid-19 wallaanuuf akka gargaaru baruuf UKtti yaaliin jalqabame
21 Caamsaa 2020
Qorichooti busaa lama dhibee Covid-19 ittisuuf fayyada yoo ta’e ilaaluuf yaaliin Biraayteniifi Oksifoorditti eegaleera.
Qorichooti Kilooroquwiiniifi haydirookilooquwiin hojjatoota fayyaa 40,000 Awurooppaa, Afrikaa, Eeshiyaafi Ameerikaa kibbaa jiraniif ni kennama. Namootni yaalii kanaratti hirmaatan hundi hojjatoota fayyaa dhukkubsattoota Covid-19 waliin qunnamtii qabaniif kennama.
Torban kana keessa Pireezdaantiin US Donaald Tiraamp akeekkachiisa rakkoo uumuu danda’a jadhamu dhiisuun Kilooroquwiinii fudhaachaa akka jiru erga beeksisee qeeqameera.
Hirmaattoonni yaalii kanaa UK ji’oota sadiif haydirookilooroquwiin ni keennamaaf. Hirmaatoota Eeshiyaafis Kilooroquwiin ni kennamaaf.
Wiirtuuwwan 25 UK keessatti kan gaggeefamu yaaliin kun bu’aan isaa dhuma waggaa kanaatti ni argama jedhamee yaadama.
Yaaliin kun namoota dhukkuubsatoota Covid-19 kunuunsa kamiifu banaadha, garuu namootni kun Covid-19 hubaman ta’uu hin qaban.
Qorichi busaa Tiraamp fi Indiyaa waldhabsiisaa jira
Talaallii Covid-19 irratti mallattoo abdii jalqabaa
Yaaliin kun qoriichooti kun hojjeetota fayyaa vaayirasichaaf saxilaamoo ta’an irraa koronaavaayirasii ittisuu danda’ama yoo ta’e kan ilaaludha.
‘Bu’aa ykn miidhaa’
Kanneen qorannoo kana hogganaan keessaa tokko Yunvaarsitii Oksifoord irraa Piroofesar Nikoolas Waayit, “Kilooroquwiin ykn haydirookilooquwiin Covid-19 ittisuuf bu’aa ykn dhibbaa qabatee hin beeknu,” jedhu.
Garuu yaaliin to’atamaa akkanaa kan qorattoonnis ta’e hirmattonni eenyu qorichoota kana akka fudhanne kan hin beekne, bu’aa isaa baruuf mala gaariidha.
“Talaalliin bu’aa qabeessa, miidhaa hin uumneefi salphaatti argamu yeroo dheeraaf waan dhufu miti,” jedhu qoronnoo kan kan dursan Pirofesar Maartin Liwelin.
“Yoo qorichoota akka kilooroquwiiniifi haydirookilooquwiin carraa Covid-19 qabamuu hir’isuu kan danda’u ta’e kun waan bu’a qabeessa ta’a.”
Qorichi busaa dhibee covid-19 ittisuuf hagam fayyada?
Qorichooti kun ho’iinsaa qamaafi dhaqna wanta dhiitessuu hir’isuu, akkasumas dhibee busaa ittisuufi wal’aanuuf fayyadu.
Dhabbileen tola ooltummaa UK fi US keessa jiran qorichooti kun sababa koronaavayirasii xiyyeefannon waan itti baayyateef namoota dhugumaan qorichooti kun barbaachisuuf hanqinni uumamuu danda’a jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru.
Qorichii kun xiyyeeffannoo guddaa kan argate erga Pireezdaantiin US Donaald Tiraamp bu’aa qabaachuu danda’a jedhaniifi torban kana keessa Covid-19 offirraa ittisuuf kilooroquwiin fudhaachaa akka jiru beeksiseedha.
Talaallii koronaavaayiras: Yaaliin talaallii koronaavaayirasii dhukkubsataa jalqabaatiif UK'tti kenname
Koronaavaayiras: Taanzaniyaan ‘qoricha Covid-19’ Madagaskaarirraa biitachuuf
4 Caamsaa 2020
Koronaavaayiras: Qorichi busaa dhibee covid-19 ittisuuf hagam fayyada?
Koronaavaayiras: Ameerikaatti namichi qoricha koronaavaayirasii ittisa jedhee yaade fudhate du'e
Qoricha koronaavaayiras: Qoricha dhibee Covid-19 fayyisu yoom argannaa?
23 Ebla 2020
Koronaavaayiras: Qorichi busaa Tiraamp fi Indiyaa waldhabsiisaa jira
Koronaavaayiras: Talaallii Covid-19 irratti mallattoo abdii jalqabaa
19 Caamsaa 2020
Koronaavaayirasii: Ameerikaan talaallii jalqabaa namoota fedha qabaniirratti yaalaa jirti
17 Bitooteessa 2020